Dare Rorambira Chin'ono Kubvisa Mari yeChibatiso
Mutori wenhau, Hopewell Chin’ono, uyo ari kupomerwa mhosva yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare, anyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramejasitiriti.
Vachitura mutongo wavo, mutongi wedare ramejasitiriti, Amai Marehwanazvo Gofa, vati Chin’ono haakodzere kupihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Asi Amai Gofa vatsoropodza vachuchisi vehurumende panyaya iyi nemashoko avo ekuti Chin’ono anofanira kugara mujeri nekuti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge mupurisa ari kuferefeta mhosva iri kupomerwa Chin’ono, VaNaison Chirape, vakaudza dare nezuro kuti pane vafakazi vatatu vavasina kudoma nemazita vari mubazi revachuchisi reNational Prosecuting Authority vavari kuda kuti vagozovanyoresa magwaro ekuroroverera Chin’ono.
Amai Gofa vati hurumende haifanire kuvharira mujeri kuti igoferefeta vachiti nyaya inofanira kutanga yaferefetwa munhu ozosungwa.
Amai Gofa vatiwo zvakataurwa nemuchichisi kuti mhosva iri kupomerwa Chin’ono imhosva yakakura kwazvo hachisi chikonzero chekuti Chin’ono asapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Vatiwo hurumende haina kuunza kudare mamwe mashoko ayakataura mudare kuti akanyorwa naChin’ono padandemutande rake mukuparwa kwemhosva vachiti izvi zvinoratidza kuti hurumende iri kuviga humwe humbowo uye vati zvakare vachuchisi ndivo vaifanira kupa humbowo hunonwisa mvura hwekuti sei hurumende ichiti Chin’ono anofanira kuramba ari muhusungwa.
Asi mukupeta mutongo wavo, Amai Gofa vati dare raona zvakakodzera kuti rinyime Chin’ono mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti Chin’ono anogona kunopara dzimwe mhosva kana akapihwa mukana wekubuda mujeri.
Amai Gofa vati Chin’ono munhu akapara mhosva panguva iyo imwe mhosva yaari kupomerwa isati yapera mumatare saka vanoona sekuti munhu anogara achikoromora mhosva.
VaMtisi vati havasi kufara nemutongo uyu vakati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachiti Chi’n’ono munhu asati ambobatwa nemhosva kuti anganzi ihoromori.
Rimwe remagweta aChin’ono, VaDouglas Coltart, vaudza vatori venhau panze pedare kuti Chin’ono ari kushungurudzwa pamusana pebasa rake rekutora nhau vachiti kuburitsa kwaari kuita nyaya dzehuori ndiko kwakakonzera kuti asungwe.
Zvichakadai, Amai Gofa vati Chin’ono agodzoka kudare musi waMbudzi 26.
Chin’ono akatarisirwawo kutanga kutongwa musi waZvita 7 pane imwe mhosva yaari kupomerwa yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati achishandisa zvakare dandemutande rake reTwitter.